साँझ बिहानको छाक ः हथौडा र ढुङ्गाको साथ
जुम्ला ः खेतीपाती गरौँ उमेर ढल्किसक्यो । बिहान बेलुका छाक टार्न निकै धौ धौ पर्छ उनलाई । घरमा जग्गा भएपनि खनजोत गर्ने कोही छैनन् । दुई छोरा छुटिएर बसेका छन् । आफ्नो नाममा भएको ज्यूनारी जग्गा खनजोत गर्न नसकेरै बाँझो भो । पति बितेको झण्डै तीन वर्षभयो । पति स्वर्गीय भएपछि उनको जीवन शुन्य भएको छ । यता जग्गा कमाउन नसक्ने ! उता भोको पेट पाल्नु पर्ने ! दिन गुजार्न निकै मुस्किल छ । उमेरले ६३ वर्ष नाघिसकेकी उनले बुढेसकालमा छाक टार्ने केही उपाय नलागेपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा बिहान बेलुकाको गास जुटाउन गिटी कुट्ने विकल्प रोजेकी छन् ।
यो दिनचर्या हो तातोपानी गाउँपालिका २ की एकल महिला छुमकली कामीको । ‘उमेर ढल्कँदै गएपछि सबैले हेला गर्दा रहेछन् । छोरा बुहारी नातीनातिनीहरू कोही पनि उनको साहारा गर्ने छैनन् । गर्ने मान्छे नभएपछि जग्गाले आफैँ उत्पादन दिँदो रहेनछ ।’(उनले भनिन् । ‘बिहान बेलुका भोको पेटलाई शान्त पार्न पनि बुढेसकालमा गिट्टी कुट्नु पर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।’ पति छँदा निकै खुसीका साथ जीवन बिताएकी छुमकली कामीको अहिले सडकमा ढुङ्गामाटोसँग पिरती गाँसिएको छ । ‘एक दिन हथौडा र ढुङ्गासँग भेट भएन भने त्यो दिन नियास्रो नै लाग्छ ।’(उनले भनिन् । पतिको मृत्यु भएपछि जिन्दगी चलाउन यो मात्रै साहरा बाँकी रहेको छुमकली कामीको कथन छ ।
बिहान १० बजे हतारिँदै सडकको पेटीमा गिट्टी कुट्न पुग्छिन् छुमकली । दिनभरी गिट्टी कुटेपछि साँझ कुम्ला कुटुरा बोकेर घर फर्किन हतार ! उनी ५ बजे फर्कि्न्छिन् । अरु कार्यालय जाने समयमा छुमकली गिट्टी कुट्न जान्छिन् र कार्यालय र्फकने समयमा घर फर्कि्न्छिन् । ‘एक दिनमा जति धेरै गिट्टी कुट्यो, त्यति धेरै आम्दानी हुने भएकाले फुर्सदमा व्यर्थै समय खर्चनु भन्दा गिटी कटुनु नै बेस छ ।’(उनले भनिन् ।(‘पतिसँगै हुँदा अलि सहज थियो, अहिले निकै गाह्रो छ ।
अहिलेसम्म उनले झण्डै ३० हजार रुपियाँ कमाएकी छन् । गिटी कुटेको पैसाले नुन तेल, अनि लुगाफाटो गर्न अलि सहज भएको बताईन् । त्यस्तै कितु चनाराको पनि दैनिकी समस्या गिट्टी कुटेर नै टरेको छ । उनका पनि श्रीमान छैनन् । दुवै जना छोरा छुटिएपछि अहिले नुन तेल साबुन किन्ने समस्या र्टार्न आफुले गिट्टी कुट्ने साहारा लिएको बताइन् । ‘एक ट्रलीको ५ हजार रुपियाँमा बेच्ने गरेको छु ।’(उनले भनिन् । कितु चनारा र छुमकली कामी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । जुम्लामा गिटी कुटेर दैनिकी चलाउने दलित महिलाहरूको सङ्ख्या सयौँ छन् । जुम्लाका अधिकांश दलित महिलाहरू सडक पेटीमा गिट्टी कुटेरै खर्च जुटाउँछन् । गिट्टी कुटेरै वाषिर्क ५० हजार रुपियाँभन्दा बढी कमाउँछन् । जुम्लाका दलित महिला, फुर्सदको समय व्यर्थै विताउनु भन्दा सदुपयोग गनुपर्ने चेतनाको विकास भएको जुम्लाका महिलामा । कोही कोही ‘साउमहाजन’ले गिटीको मुल्य अनियमितता गरेर गरिब माथि अन्याय गर्ने महिलाको दुखेसो छ ।
जुम्लामा बढेको पक्की घर भवन निर्माण कार्यले निम्न आयस्तर भएका महिलाहरूलाई निकै राहत भएको छ । पहिला पाँच रुपियाँ पनि माग्न दिनहुँ ‘साउमहाजन’को घरमा कुर्नुपर्थ्यो । स्थानीय महिला काशीकला परियारले भनिन्(‘तर, पक्की भवन घर निर्माण गर्दा गिट्टी अनिवार्य चाहिने भएकाले आफू जस्ता बेसहाराहरूलाई राहत भएको छ । केही नभए पनि नुन तेलको जोहो गर्न सकिएको उनले बताइन् । कहिले काँही साहुमहाजनहरू सही मुल्य दिन्छु भनी लिने तर पनि घटाएर दिँदा आँखा अगाडि गरिबको श्रम माथि शोषण गर्ने गरेको अर्की महिला बेलु चनराले दुख पोखिन् । कडा परिश्रम गरी ढुङ्गा फोड्यो पछि सहि मुल्य नदिएपछि आँसुनै आउने उनको अनुभव छ । जुम्लाका हरेक बस्तीका बेसाहारा अरू भन्दा दलित महिलाहरू गिट्टी कुटेर घर्रखर्च छोराछोरीको पढाइ, नुन तेलको जोहो गर्ने गरिररहेका छन् ।